Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Muedzo Mutsva Wekiriniki Inoongorora Huropi Yakadzama Kukurudzira Kurapa Alzheimer's
Allegheny Health Network (AHN) vanachiremba vapinda muyedzo yekiriniki yakakosha vachiongorora kuchengetedzeka uye kushanda kweyakadzika uropi inosimudzira kurapa kurapa chirwere cheAlzheimer. Vachitungamirirwa naDonald Whiting, MD, sachigaro weAHN's Neurosciences Institute, Chief Medical Officer weAHN, uye piyona mukushandiswa kweDBS kurapa mamiriro akasiyana-siyana anopedza simba etsinga, Chidzidzo cheADvance II chirongwa chepasi rose chechitatu chekiriniki chiri kupihwa chete. panzvimbo dzezvokurapa dzakasarudzwa pasi rose.
"Takaziva kubva mukushandisa kwatinoita DBS kweanoda kusvika makumi maviri emakore kurapa kusagadzikana kwekufamba kwakadai seParkinson's uye kudedera kwakakosha kuti nzira iyi kurapa kwakachengeteka uye kunobvumirwa," akadaro Dr. Whiting. Vanhu vanopfuura zviuru zana nemakumi matanhatu pasi rose vakagamuchira kurapwa kweDBS kwemamiriro aya.
AHN ndeimwe yemasaiti makumi maviri chete muUnited States akasarudzwa kutora chikamu muChidzidzo cheADvance II icho chiri kuitwawo muCanada neGermany.
Chirwere cheAlzheimer ndiyo yakajairika nzira yedementia. Anofungidzirwa mamiriyoni 6.2, kana mumwe muvapfumbamwe vokuAmerica vane makore 65 zvichikwira vari kurarama neAlzheimer's; 72 muzana vane makore 75 kana kupfuura. Chirwere cheAlzheimer chirwere chinoramba chichienderera mberi uye pakupera kwayo, tsinga dzeuropi dzinoita kuti munhu akwanise kuita mabasa emuviri, akadai sokufamba uye kumedza. Chirwere ichi chinozouraya uye hapana mushonga unozivikanwa.
DBS yeAlzheimer's inosanganisira kushandiswa kwemudziyo wakadyarwa wakafanana neheart pacemaker uye waya mbiri dzakanamirwa dzinoendesa mapuruzi emagetsi akapfava akananga kunzvimbo yeuropi inonzi fornix (DBS-f), iyo inobatanidza nekuyeuka nekudzidza. Iko kurudziro yemagetsi inotendwa kuti inomutsa ndangariro inotenderera muuropi kurodza basa rayo.
Dzidzo yakasarudzika, yakapetwa kaviri-mapofu ichagara makore mana kune vatori vechikamu, mumwe nemumwe wavo achaita chiyero cheAlzheimer's assessment vasati vaiswa neurostimulator. Mhedzisiro yekuongorora iyi yemuviri, yepfungwa, uye yekuziva ichashandiswa seyero yekutanga sezvo ivo vachigara vachiongororwa mwero wekufambira mberi kweAlzheimer mukati menguva yese yechidzidzo.
Kutevera kuisirwa, zvikamu zviviri muzvitatu zvevarwere zvichave zvisina kujairika kuti neurostimulator yavo ishande uye chikamu chimwe chete muzvitatu chinenge chasiiwa mudziyo wavo. Varwere vane mudziyo wakadzimwa pakutanga kwechidzidzo vachaita kuti ushandiswe mushure memwedzi gumi nemiviri.
Munguva yese yekuedzwa kwekiriniki, vatori vechikamu chidzidzo vachatariswa neboka rakasiyana-siyana reAHN neurologists, psychiatrists uye neurosurgeons, kusanganisira Dr. Whiting uye pamwe nevamwe AHN neurosurgeon uye DBS nyanzvi Nestor Tomycz, MD.
Kuti vakwanise kutongwa, varwere vanofanirwa kunge vaine makore makumi matanhatu nemashanu kana kupfuura, vakaonekwa vaine Alzheimer's, vaine hutano hwakanaka, uye vaine mutarisiri akasarudzwa kana nhengo yemhuri anovaperekedza kunoshanyira chiremba.
"Migumisiro yezvikamu zvepakutanga zvekuongorora kwekliniki iyi inovimbisa uye inoratidza kuti kurapwa kunogona kubatsira varwere vane Alzheimer's nyoro kuburikidza nekudzikamisa nekuvandudza basa ravo rekuziva," akadaro Dr. Whiting. "Kutaura kuti kubudirira kwechidzidzo ichi kunogona kushandura hupenyu kumamiriyoni eAmerica akabatwa nechirwere ichi chinopedza simba, chirwere chinouraya hachisi kushomeka. Isu tinofara kuva pakati pemapoka ekuvhiya ane mukurumbira pasi rose anopa varwere veAlzheimer mukana kune iyi innovation. "
Pasi peutungamiri hwaDr. Whiting, AHN's Allegheny General Hospital yakagara iri mberi kwekuedza kwekupayona kufambisira mberi kushandiswa kwekudzika kwehuropi. Chipatara ichi chaive chekutanga kumadokero kwePennsylvania kushandisa tekinoroji kurapa kubvunda kwakakosha uye Chirwere cheParkinson, uye nguva pfupi yadarika, Dr. Whiting nechikwata chake vakatanga chikamu chechipiri chekuongorora kwekiriniki vachiongorora kushanda kweDBS kubatsira kubata kufutisa.
Kanadha chipatara Pennsylvania nyika dzakabatana
Chirevo Chitsva: Kusiyanisa Ekutanga Alzheimer's ...
Ndira 25, 2022 pa08: 17
mary belinda anoti:
Ndira 22, 2022 pa17: 15
Murume wangu akabatwa chirwere cheParkinsons makore maviri apfuura, paakanga ava nemakore 2. Aive akatsikitsira, kudedera, ruoko rwerudyi harufambi uyezve kunzwa kupuruzira mumuviri wake. Akaiswa paSenemet kwemwedzi misere uye ipapo Siferol akaunzwa uye akatsiva Senemet, panguva iyi akaonekwa kuti ane dementia. Akatanga kuona zvinhu zvisipo, akashaya pekubata. Ndichifungidzira kuti waiva mushonga wandakamubvisa paSiferol (neruzivo rwachiremba) iye paPD natural herbal formula yatakarayira kubva kuTREE OF LIFE HEALTH CLINIC, zviratidzo zvake zvakaramba zvachose pamusoro pemavhiki matatu kushandiswa kweTREE OF LIFE HEALTH chirwere cheParkinson. herbal formula. Iye zvino ave kuda kusvitsa makore makumi matanhatu nerimwe uye ari kunyatsoita zvakanaka, chirwere chanyatso chinja! (ww w. treeoflifeherbalclinic .com)